Fanamboarana solosaina → amboradara solosaina / P&M akanjo vita amin'ny solosaina
Ho fanampin'ny akanjo, ny peta-kofehy dia matetika vita amin'ny vokatra toy ny kitapo, satroka, lamba famaohana ary fandroana. Ny logo misy amboradara dia azo antoka fa matanjaka kokoa ary mahatohitra fitrandrahana kokoa noho ny fomba hafa fanamarihana amin'ny fampiasana sary-tsipika.
Ny peta-kofehy dia tsy tokony hatao amin'ny amboradara amin'ny akora misy fehezan-teny ambany tsy mihoatra ny 190 g / m2. Ny peta-kofehy lehibe dia hanome ny fiheverana ny "ampinga", tsy ho miovaova izy io mandritra ny fampiasana azy, ary rehefa ampiharina amin'ny fitaovana manify - ny fanjaitra dia afaka mamoaka fitaovana manify toy izany.
Ny fanaovana amboradara amin'ny solosaina dia somary kely ihany ara-toekarena. Na izany aza, singa maromaro no mandray anjara amin'ny fanombanana marina. Isam-batan'olona, ​​ny peta-kofehy dia mora kokoa rehefa manafatra vokatra bebe kokoa. Ankoatr'izay, ny haben'ny amboradara sy ny fahasarotan'ireo sary dia misy fiatraikany lehibe amin'ny vidiny, izay adika amin'ny fanombanana ny hakitroky ny amboradara. Ny lehibe kokoa ny amboradara, ny kinks bebe kokoa, ny fitambarana ary ny lehibe kokoa ny habeny, ny matevina ny peta-kofehy. Ary koa, ny isan'ny toerana hametrahana ny amboradara (ohatra ny logo eo alohan'ilay tratra havia + logo eo afovoan'ny lamosina) dia zava-dehibe amin'ny vidin'ny singa. Matetika ny vidiny dia tsy misy fiantraikany amin'ny isan'ny loko ampiasaina, satria ny milina fanjairana dia misy kofehy maro. Ny vidin'ny fanomanana dia tokony ampidirina amin'ny filaharana amboradara voalohany programa fanaovana amboradaraizay efa ao anaty data-ntsika ary tsy ampiana amin'ny baiko manaraka.